Isimanga siwukuthi kodwa isiqephu ezifana izithelo njengengelosi apula kuvamile emazweni amaningi emhlabeni wonke, futhi kuwo wonke amagumbi iplanethi yethu kutuswa ukupheka ngendlela ekhethekile. Kanjani - ubuza ... Kulula kabi! Apple akuyona kuphela liyinqolobane amavithamini, okungase kudliwe ufana nje emini, ukuthatha onqenqemeni off isibungu abalambayo, libuye lisetshenziswe amasaladi, izithelo amapuleti ku ... elimnandi. Yebo, kukhona isidlo enjalo esihlwabusayo - apula kubhakwa, iresiphi of okuzoxoxwa ngokuningiliziwe, futhi embodiments ahlukahlukene athé aphansi.
Apples wabhaka nesinamoni
Indlela yaleli dessert silula futhi ayidingi ukuthinta ethize. Engingakusho nje ambalwa apula (okuningi njengoba udinga ukuthola ngokwanele futhi uzinike ukudla izivakashi), ushukela, usinamoni, lemon, ibhotela ngofulawa omncane. Ngaphambi kokuthi uqale ukupheka, ukuvula kuhhavini on amandla ngokugcwele - lona isikhathi ukuxoxa kahle, ngakho-ke ungalindi imizuzu engu-15. Manje sithatha apula wethu futhi usike wabayisa tincetu round we ukushuba mayelana 2 ngamasentimitha. ukususa ngokucophelela umbuthano ngamunye core, siye etholwe "bagels." Isiqeshana ibhotela Athambisa lonke pan, kancane ufafaze isipuni ufulawa ukubeka apula asikiwe kuso. Manje, endishini encane, mix usinamoni, ushukela, kalamula, ubuhlungu kahle Athambisa apula, zama hit ingxube kuso, kungenjalo uzovutha. Ngo kuhhavini osuke usushisa kakade sibeka apula wethu bhaka imizuzu 25-30 ukuze nje kungukuthi embozwe uqweqwe segolide. Lawa apula kubhakwa. Iresiphi, njengoba ungabona, ulula, kodwa umphumela ngeke sijabulise nawe ukunambitheka kwako kanti iphunga!
Apples, wabhaka e khekhe Puff
idatha yi apula ukupheka ongaqhathaniswa mini-ophaya apula ukugcwaliswa. Kubukeka isidlo kumnandi - akusiyo isono, uzithobise phansi etafuleni samaholide elimnandi. Ngokuba ukulungiswa sidinga ngaphandle imvubelo inhlama, Puff, okuyinto okuthengiswa iyiphi esitolo, apula eziningana naphakathi, noma iyiphi ujamu, amaqanda 2 noshukela oluyimpuphu, uma uthanda. Ngaphambi kokuthi uqale, vula kuhhavini at amandla aphakeme. Nakuba kuhhavini yethu iyazifudumeza, thina ukugeza apula udiliza kubo kusukela isikhumba ngommese esikhethekile yokuhlanza - ngakho isikhumba kuyofika off ichopho mncane, kokushiya indawo isikhathi esingaphezu inyama. Sika isithelo kwekota, abasindise kusuka imbewu. Manje ukusika inhlama incibilikiswa tikwele cishe 10 by 10 amasentimitha, ukuze bakwazi ukuvala test ukugcwaliswa. apula asikiwe ugcwalise ujamu, wayesezibeka inhalanganiselo izigcawu inhlama onqenqemeni zaschipyvaem ngokucophelela - konke okufanele kwenziwe ngokucophelela ngakho apula kubhakwa, sezimoto yethu kungukuthi oputshukile. Manje bagcobe baking ibhotela ukhilimu, wasibeka izimvilophu inhlama kanye apula, kancane amafutha zamaqanda. Bhaka kufanele kube nje umbhalo is hhayi kwakhiwa kuphekeke uqweqwe, kuyoba lesibonakaliso sokuqala ukuthi ukudla kwethu usulungile. Thatha okuphuma kuhhavini, apula wethu Puff khekhe ufafaze esivulekile nge ushukela oluyimpuphu. Lapha futhi ukulungele wabhaka apula! Leresiphi isuka kwesinye isizukulwane iye kwesinye akuyona eyikhulu.
Kuthiwa lena isidlo ovamile kakhulu - apula kubhakwa. Iresiphi for sokulungiselela yabo kumele ibe inhloko yomkhaya ngamunye, okuyinto ufuna Ngamangala umndeni wakho kanye nezivakashi. Ngiyavuma, lezi ukudla ezikhangayo ekulungiseleleni Kulula ngempela futhi lonke inqubo asidli isikhathi esiningi. apula Baked kukhona impumelelo ukuthweswa umqhele ka isidlo sasemini noma dessert ezimele. Bangakwazi wakhonza amajikijolo, noma indilinga vanilla ice cream - ashisayo nabandayo apula ice cream ekuhlanganisweni ukunikeza ukunambitheka akunakuqhathaniswa.
Easy ukulungiselela ikhekhe "Black Prince", ungakwazi ukuhlobisa itafula samaholide
Watchmakers Swiss zilungele ancintisane "ukhaliphile" amahora Apple
Ngezabelo Lungile isixazululo odongeni olukhonkiwe
Rejuvenation non-kuhlinzwa of ebusweni nasemzimbeni